Abdiraham A.Shakuur oo sheegay in Farmaajo uu ka been-sheegay hay’addaha maal-gelinaya mashruuca Baxnaano – Kalfadhi
Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir C/raxmaan C/shakuur Warsame ayaa sheegay in Madaxtooyada Villa Somalia ay ka been-sheegtay cida maal-gellineysa mashruuca Baxnaano , kaas oo dhawaan uu Madaxweynaha daah-furay.
Mashruuca ayaa la dooneyaa in lagu taakuleeyo dad gaaraya 1.3 milyan oo qof oo ah dadka danta yar.
Mudane Cabdiraxmaan, ayaa yiri “Waa wax laga naxo in madaxweynihii dalka uu kari waayo in uu ka run sheego mashruuca Baxnaano ee uu shalay daah furay. Mashruuca oo sanado soo socday waxaa deeqdiisa leh Baanka Aduunka, fulintiisana haydaha WFP iyo UNICEF, maamulkiisa kore ayaa lagu maamusay dawlada Soomaaliya, waxaana loogu tala galay in lagu gacan qabto dadka ay abaaraha, fatahaadaha webiyada iyo masiibooyinka kale ee dabiiciga cayrteeyeen oo ay dalagii iyo xoolahii noolaa ka baabi’iyeen ka dibna xeryaha qaxootiyada galay, si ay noloshoodii dib ugu laabtaan oo saboolnimada looga saaro”.
“Sow ma haboonayn intii uu Madaxweynuhu oran lahaa waa markii ugu horaysay oo ay dawladu dadkeeda deeq gaarsiiso in uu mashruuca runta ka sheego, una mahadceliyo cidii deeqda bixisay, kuwa fulinta u xilsaaran, kadibna xuso kaalinta ay dawlada mashruuca haatan ku leedahay, isagoo khajilayana raaciyo kaalinta haboonayd in ay dawlada ku yeelayo intii uu sheegan lahaa deeq ajnabi ah ka timid, una ekeysiin lahaa in loogu tala galay ka hortaga Karoona Fayris”ayuu hadalkiisa sii raaciyay.
Guddoonka Labada Aqal ee Baarlamaanka oo dib-u-dhigay furitaanka kalfadhiga 7-aad sababo la xiriira cudurka COVID-19